Mambosy akoho akoho mora moka - Fomba Fanamboarana
henan-kisoa nofonosana henan-kisoa natsatsika tamin'ny nahandro
izay mandeha tsara amin'ny akoho bourbon
black and decker crisp ary manendasa fomba fahandro
mandra-pahoviana no mahandro ny tongotr'akoho?
aiza aho no afaka mividy zucchini nendasina
Mambosy akoho akoho mora moka
Manendy akoho akoho Ny fomba fahandro dia mora mahatsikaiky atao amin'ny akora efa anananao ao amin'ny pantryo. Haingam-pandeha, feno tsiro ary tsara aroso miaraka amin'ny vary mangamanga.
Ny fandrahoana ny fries dia fomba iray lehibe hanamboarana sakafo hariva satria haingana dia haingana izy ireo miaraka. Akoho amam-borona sy fikorisa SY Akoho Teriyaki esory endasina no tiako indrindra!
Matetika isika dia manana saosy roa toy ny saosy soja sy saosy oyster ao anaty pantry anay mba hahafahan'ny fomba fahandro tahak'izany mifangaro ao anaty jiffy.
Fantatro fa sarotra tokoa ny mieritreritra fomba fahandro sakafo tsy manam-paharoa isan'andro izay no mahatonga anao indray mandeha indraindray mila resipeo any am-paosy izay azonao averina foana. Ary ity fomba fahandro akoho mahasalama mahasalama ity dia haingana, mora ary vita amin'ny akora izay tsy mila dia mankany amin'ny magazay.
Ny fianakaviako dia vonona foana hanome ny akoho, na amin'ny endrika inona na avy amin'ny inona Akoho amam-borona taloha ny Chicken Divan , noho izany dia manana tratra akoho vitsivitsy ao anaty vata fampangatsiahana foana izahay.
Fomba fanamboarana akoho akoho
Ity fomba fahandro ity dia manomboka amin'ny fanaovana ny akoho amam-boankazo marinade amin'ny saosy, tongolo lay namboarina sy dipoavatra ary totoina ny akoho ao aminy mandritra ny dimy ambin'ny folo minitra. Manampy amin'ny fananganana tsiro bebe kokoa amin'ny akoho izany ary mamorona fototra tsara ho an'ity fomba fahandro ity.
Ny fotoana fandrahoana sakafo sy fikolokoloana dia 20 minitra fotsiny, ary azonao atao ny manety ny akora rehetra omena anao raha mbola mikioka ny akoho. Manampy sakamalao sy tongolo gasy voatetika tsara izahay, tongolo voatetika, dipoavatra lakolosy maitso sy mena ary saosy vitsivitsy hamita izany, raha vantany vao masaka ny akoho. Ary avy eo ianao dia manipy ny zava-drehetra miaraka fotsiny.
Izahay dia mametaka ireo sombin'akoho voadio ao anaty vovo-katsaka mba ho tsara sy malemy ao anaty lapoaly alohan'ny handrahoana azy ireo amin'ny ambin'ireo akora.
Manampy crispness kely amin'ny akoho izy io ary manampy amin'ny fitazomana ny tsiro tsy ho simba. Ny akoho dia andrahoina amin'ny lelafo avo mba hahitana milay, ary satria tratra akoho kely ireto dia mahandro ao anatin'ny folo minitra izy ireo.
Tiako ny mampiasa dipoela lakolosy maitso sy mena satria manampy tsiro maranitra miaraka amina hanitra mamy amin'ity fomba fahandro ity. Aza misalasala afangaro amin'ny mavo na mandeha amina karazana iray fotsiny. Azonao atao koa ny manamboatra akorandahy broccoli akoho ity raha izany no tadiavinao!
Raha vantany vao atsipy ao anaty saosy mofomamy mora mofomamy ny zava-drehetra dia handeha avy hatrany amin'ilay lapoaly ianao. Ny saosy palitao ny akoho dia matsiro be, ary sotro amin'ny etona sasany -BARY , vary sichuan na koa Vary koveta , izany dia mahatonga ny sakafo hariva tonga lafatra!
REHETRA INDRINDRA MISY MORA MORA AZA!
Omby Mongolianina mora
Fonosana vita amin'ny ravinkazo Teriyaki Shrimp
Akoho Jeneraly Tso
Ity akoho voatoto nendasina tamin'ny legioma ity ihany koa dia manome ambiny be dia be ary tena matsiro kokoa rehefa mandeha ny fotoana.
Manendy akoho akoho
Fotoana fanomanana10 minitra Fotoana fandrahoan-tsakaforoa-polo amby minitra dimy ambin'ny folo minitra Fotoana manontolo30 minitra Fanompoana4 People MpanoratraRicha gupta Ity fomba fahandro Pepper Chicken Stir Fry ity dia mora mahatsikaiky atao amin'ny akora efa anananao ao amin'ny pantryo. Haingam-pandeha, feno tsiro ary tsara aroso miaraka amin'ny vary mangamanga. pirinty Pin
Ho an'ny Marinade
▢4 tratra akoho tapaho ho 1 santimetatra
▢rOA tablespoons maivana aho saosy
▢1 sotrokely tongolo gasy toto-kena-
▢1 sotro menaka sesame masaka
▢1 sotrokely dipoavatra mainty
Ho an'ny fikororohana Fry
▢¼ kapoaka saosy oyster
▢rOA sotro vinaingitra
▢½ kapoaka rano
▢3 tablespoons vovoka katsaka nizara roa toko
▢3 tablespoons menaka legioma nizara roa toko
▢1 ankamaroan'ireo tongolo tapaho ho 1 santimetatra
▢1 SALASALANY dipoavatra lakolosy maitso tapaho ho 1 santimetatra
▢1 SALASALANY dipoà lakolosy mena tapaho ho 1 santimetatra
▢4 jirofo tongolo gasy voatetika tsara
▢1 santimetatra sakamalaho voatetika tsara
Atambaro ireo akora rehetra voatanisa ao ambanin'ny marinade, anisan'izany ny akoho, ary atokana mandritra ny 15 minitra farafahakeliny.
Miara-manosotra saosy oyster, saosy soja, vinaingitra, dipoavatra mainty, rano antsasaky ny kaopy ary katsaka iray sotro iray ary atokana.
Raha vantany vao vita marinina ny akoho dia atsipazo ao anaty akanjony roa sotro fihinana.
Afanaina ao anaty vilany lehibe ny diloilo roa sotro fihinana ary ampio ny sombin'akoho. Aza atao be loatra ny vilany ary raha tsy ampy ny lapoaly dia ataovy anaty andiany. Andrahoy amin'ny hafanana ambony mandritra ny 3 minitra ny andan'akoho. Esory ny sombin-tsakafo ary apetraho.
Ampio ny diloilo iray sotro fihinana amin'ny lapoely amin'ny hafanana ambony, ary ampio ny tongolo sy dipoavatra. Atsipazo ao anaty lapoaly mandritra ny iray na roa minitra izy ireo mandra-pahafana ny lokony ary nandrahoina kely. Atsipazo ny sakamalao sy tongolo lay ary mahandro mandritra ny iray minitra.
Arotsaka ao anaty lapoaly ny sombin'akoho sy ny saosy mifangaro. Atsipazo tsara ny zava-drehetra, ary apetaho mandritra ny iray na roa minitra mandra-pahatongan'ny saosy sy hampitafy tsara ny akoho. Ampiasao mafana miaraka amina laoka na legioma eo anilany.
Kaloria:460,Karbohidraty:16h,Proteinina:51h,Tavy:roa-polo ambyh,Tavy voky:10h,Cholesterol:144levitra,Sodium:1670levitra,Potasioma:1055levitra,Fibre:rOAh,Sugar:3h,Vitamina A:1110IU,Vitamina C:68.6levitra,Kalsioma:33levitra,Vy:1.7levitra
Teny lakileendasina akoho Mazava ho azysakafo hariva masakaAzia© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady zahao eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Avereno resahina ity Recipe Fry Tsotra ity
Teriyaki Shrimp Broccoli Mandroroa Fry
Akoho volomboasary Skillet
Ahosom-boaloboka Asparagus Akoho